Ụlọikpe anapụla Ugwuonye ikike ịbụ ọkaiwụ - BBC News Ìgbò
Ụlọikpe anapụla Ugwuonye ikike ịbụ ọkaiwụ
29 Eprel 2018
Nkenke aha onyonyo Ikpe nkwụmọọtọ bụ oke dịrị mmadụ niile
Ụlọikpe ọkachasị nọrọ n'Abụja wepụrụ aha onye ọkaiwu bụ Emeka Ephraim Ugwuonye, n'akwụkwọ ndị ọkaiwu ala Naijiria.
Ụlọikpe ọkachasị kwụpụtara mkpebi ahụ n'akwụkwọ ozi ha degara Ugwuonye, n'ụbọchị iri abụọ na anọ nke ọnwa Eprelu nke Gertrude B. Bari-Nyana Esq tinyere aka na ya n'aha onyeisi ụlọikpe.
Otu nwaada aha ya bụ Victoria Ekweani dere akwụkwọ mkpesa iji kwuo na ya kpọrọ Ugwuonye ka ọ nọchịte anya ya n'okwu gbasara akụ nwanne ya nwaanyị nwụrụ anwụ bụ Ifeoma Ekweani. Mana ọkaiwu ahụ emeghị ihe ya gwara ya kama o tinyere akwụkwọ n'ụlọikpe, Enugu State Probate Registry, iji nata ikike dịka onye chọrọ ịnwụ nwata nwaanyị ahụ nwụrụ anwụ iji nweta ama bụrụkwa onye o ji ụgwọ iji nweta akụ ya.
Ụlọikpe enyela iwu ka anwụchie Innoson
Legọs emepeela ụlọikpe maka ndị awakporo
Dịka ụlọakwụkwọ Thisday si dee, akwụkwọ ozi ahụ sị, "Nke a bụ iji mee ka o wee gị anya na ozi kọmiti ndị ọkaiwu lebara anya n'okwu ahụ nke kwuru ka ewepụ aha gị n'akwụkwọ ndị ọkaiwu, ka ekpechara gị ikpe ma chọpụhta na ikpe mara gị n'ihi arụ ịkpara n'ọrụ gị dịka onye ọkaiwu nke megidere iwu ji ndị ọkaiwu ala anyị.
"Dịka e nweghị onye gbaghara akwụkwọ ozi ahụ nke ha dere n'ụbọchị 22 nke ọnwa Mee ,afọ 2017 tupua ohere e nyere maka nke a gafere , A na -akagbụ aha,Ugwuonye Ephraim Chukwuemeka, n'akwụkwọ ndị ọkaiwụ.
"Ugwuonye Ephraim Chukwuemeka enwekwaghị ikike ịrụ ọrụ dịka ọkaiwu nke ụlọikpe ọkachasị nke Naijirịa. A kagbuola akwụkwọ ọbụla e nyeburu gị dịka onye ọkaiwu ugbua ugbua."
Otu na-ahụ maka ịnabata ndị gụrụ iwu n'ọrụ dịka ọkaiwu nyochabụrụ okwụ ahụ ma maa Ugwuonye ikpe. Ha nyekwara onyeisi ụlọikpe ozi ka o wepụ aha Emeka Ephraim Ugwuonye n'akwụkwọ ma zigara ya ozi ị gwa ya ihe ha mere.
Ọtụtụ mmadụ apụtaghị nyocha Inec na Kogi West
Mbikọrita n'udo Naịjirịa dị mụ mkpa-Buhari
9 Febrụwarị 2018
Legọs steeti emepeela ulọikpe ọhụrụ maka ndị awakporo
1 Febrụwarị 2018
Ụlọikpe achụpụla osote onyeisi omeiwu Delta steeti
19 Eprel 2018
'Ị kụziere ụmụaka taa, ị rite uru ha echi'
Ụgbọ kọmịshọna Legọs steeti akwaala Joe Igbokwe
Malaria, Dengue, ọrịa ndị anwụnta na-ebute na etu ị ga-esi gbochie ọtịta ya